Ny lapan'i Alcazar ao Okraina
Fanamarihana Ny Alcázar dia tsy iray amin'ireo trano fialamboly mahafinaritra indrindra any Eorôpa ihany, fa koa ny prototype amin'ny sarimiaina mozika Disney. Na dia izany aza, mba hankafizana ny hatsaran'ny trano mena, dia tsy ilaina ny mandeha lavitra any Segovia (Espaina). Tena mitovy amin'ny Alcazar ny lapan'i Palanok ao Okraina any Transcarpatie.
Ny endriky ny trano fonenan'i Alcazar ao Okraina
Ny toerana misy ny lapan'i Alcazar ao Okraina dia miorina akaikin'ny tanànan'i Mukachevo, satria matetika izy no antsoina hoe rindrina Mukachevo. Ny tranobe dia eny an-tendrombohitra, izay miseho vokatry ny fipoahan'ny volkano. Ny endriky ny tranokalan'ny Espaniola Alcazar ao Okraina dia tena mahatalanjona ary mitaky dingana telo avy hatrany.
Ny trano tranainy indrindra dia ao amin'ny ampahany ambony. Tao amin'ny Trano Ambony indray mandeha dia niaina ny tompony. Tao an-drenivohitra Middle, indray mandeha dia nisy barraka, lakozia misy trano fanatobiana sy ny efitrano antsoina hoe ritter. Ny vavahady nisy ny tilikambo dia tao amin'ny Lapa Ambany. Ny lapan'i Alcazar ao Okraina ao Mukacheve dia naorina tamin'ny taonjato faha-10 tamin'ny andron'i Kievan Rus. Tsy fantatra ny daty marina, saingy tamin'io fotoana io no nananganana ireo rindrina manodidina ny tanàna hanamafy ny sisintany. Niova tsikelikely izany fiarovana izany ho lasa fiarovana matanjaka.
Tantaran'ny Alcazar ao Okraina
Toy ny tanàna mimanda iray, ny tantaran'i Castle Alcazara ao Okraina dia tantara tena be momba ny zava-nitranga. Ny fahatafintohinana voalohany dia ny fanafihana ny Tatar-Mongol Iga, nandritra ny fotoana naharesy ilay fiarovana.
Tatỳ aoriana, ny tranobe nisy ny faritany manontolo dia nomena ny fananan'ny Crown Crown, vao vita ny fanarenana voalohany ary nisy tilikambo fanampiny novorina. Nandritra ny vanim-potoana 13 ka hatramin'ny taonjato faha-13, ny alan'i Alcazar ao Okraina dia nafindra tany amin'ny toeran'ny Printsy Podolsky. Nandray anjara betsaka tamin'ny fanamafisana ny trano fiarovana sy ny fanarenana azy tanteraka izy. Taorian'ny nahafatesany dia nandefasana ny tranon'ny mpitondratena ilay tranobe ary taty aoriana dia lasa fananan'ilay satrohandey Hongroà indray izy ary nandalo avy amina mpandova iray ho an'ny manaraka.
Nandritra ny fotoana iray, ny fonja dia fonja ho an'ireo mpanao heloka bevava sy olon-tsotra. Tamin'ny fotoana nahitana an'i Transcarpathia anisan'ny tsekôslôvakia, dia ny tafika no lasa miaramila. Nandritra ny tantara dia nisy sekoly fianarana teny amin'ny rindrin'ny trano mimanda.
Amin'izao fotoana izao, ny Castle Palanok ao Okraina, izay mitovy amin'ny Alcazar, dia miorina miorim-ponenana manan-tantara ao an-tanàna, ahitana tantara fampisehoana maro, galleries sy ny sary tranainy.
Inona no ho entina avy any India?
India - visa ho an'ny Rosiana
Ny fahitana an'i Vityazevo
Ny sarivongana avo indrindra eto an-tany
Abzakovo - toeram-pialan-tsambo
Lake of Death any Sisila
Metro any Barcelone
Sehatry ny Sol-Iletsk
Sandwich tena maika
Ny polisy dia niahiahy tamin'ny fandrobana ny andian-jiolahimboto Kim Kardashian "Pink Panther"
Rahoviana no hanomezana mofo ny zaza?
Rasalimo: fambolena sy fiahiana
Boky iray nofinofy dia peratra ary inona no dikan'ireo nofinofy toy izany?
Salady Cress - tsara sy ratsy
Koala mena dia tsara sy ratsy
Ny fomba hivelomana: 16 horonantsary izay tsy hitanao akory
Sakamalao eo amin'ny varavarankely amin'ny ririnina
Ny rain'ilay bevohoka Megan Fox dia nanamafy fa niandry ilay zazalahy izy
Olana eo amin'ny fianakaviana tanora
Rhododendron - miomana amin'ny ririnina
Sakafo kaloria misy kiriodanitra vaovao
Ny bodofotsy ao amin'ny kibo dia vatana tsara tarehy ao anatin'ny fotoana fohy
Akanjo maitso - fifantenana karazana lamaody sy sary
Ity zaza matory ity dia lasa kintana Instagram!
Famoahana ny vondrona ao amin'ny kindergarten